Ziqinile izinsolo zokudlwengulwa entombazaneni ebigqitshwe egodini(14) - Ilanga News
Home Izindaba Ziqinile izinsolo zokudlwengulwa entombazaneni ebigqitshwe egodini(14)
Ziqinile izinsolo zokudlwengulwa entombazaneni ebigqitshwe egodini(14)
UMBALENHLE Sithole (14) otholwe ngamalungu omndeni wakhe eklinywe ngentambo yamateki abewagqokile, isidumbu sakhe sigqitshwe emgodini
ongashoni. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UPHELE sekumuncu umcimbi womemulo eMaqongqo, ngaseMgu-ngundlovu, ngoMgqibelo odlule, kunyamalala intombazanyana
eneminyaka ewu-14 ubudala, etholakale ngoLwesibili isishonile, igqitshwe emgodini ongashoni
Kusenzima nokukhuluma kumalungu omndeni wakwaSitho-le ngento eyehlele indodakazi yawo uMbalenhle Sithole (14), obefunda uGrade 9 eNobhala High School.
Utholwe ngumfowabo namalu-ngu omndeni egqitshiwe, isidumbu sakhe singagqokile, okuqinisa izi-nsolo zokuthi uqale wadlwengu-lwa ngaphambi kokubulawa. Isidumbu sakhe sitholwe sikli-nywe ngentambo emqaleni, siboshwe izandla ngemuva.
Ngokuthola kweLANGA ngelu-ngu lomndeni, uNkz Nomusa Sithole, basathukile ngento ebehlele kubulawa ngesihluku ingane yabo. Uthi indodakazi yabo iphume ekhaya ngoMgqibelo emini ihamba namanye amanto-mbazane asendaweni, beya emci-mbini womunye umakhelwane wabo obekunomemulo kuwona, beceliwe ukuyobhikla ingoma.
Uthi indodakazi yabo ihlukane namantombazane ebihamba nawo ngesikhathi sekugodukwa, yasala emcimbini yabatshela ukuthi izolandela ngemuva.
Uthi batshelwe ukuthi isuke kulo mcimbi ngezithuba zabo-7 kusihlwa, sekuhwalele. Uthi baqale ukwethuka uma kuze
kushaya u-9 ebusuku ingane
“Sibe sesiqala ukuyibheka lapho bekunomcimbi khona, basi-tshela ukuthi ihambe ngabo-7 ibheke ngasekhaya. Size sayolala ingane ingabuyile, obekuyinto ebiqala ukwenzeka ukuthi ihambe ingabuyi ekhaya.
“Sivuke ekuseni saqhubeka nokuyibheka, sisizwa ngomakhe-lwane, sagcina siyithole kwesinye isiza esiseduze nomuzi wakubo igqitshwe ngomhlabathi.
“Nakuba igcine itholakele kusize umfowabo kaMbali obelo-khu ebheka namalungu omndeni, oqaphele ukuthi kulesi siza kubonakala indunduma yenhlabathi. Umfowabo uthe indlela abayithole ingakhona ingane, kusolwa ukuthi iqale yadlwengulwa ngaphambi kokubulawa. Uthi emqaleni ibiklinywe ngentambo yamateki eyaphuma kubo iwagqokile.
“Kuyasicacela ukuthi umuntu owenze le nto ngumuntu oyaziyo, uyibulale ngoba ezama ukucisha ubufakazi ngento abeseyenze kuyona. Sesesaba nokuphumela emnyango ngenxa yalesi sigameko njengoba umbulali engakaboshwa.
“Kusethusile ukuthi sihleli nabantu abayizilwane kangaka, ababuka izingane zethu, bazibone zifanelwe wukudlwengulwa maqede bazibulale,” kusho uNkz Sithole.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele usiqinisekisile lesi siga-meko. Uthe bekungakaboshwa muntu, amaphoyisa aphenya icala lokubulala. Uthi kusazokwenziwa uphenyo kutholwe ukuthi ingane kayidlwengulwanga yini.
Previous articleUHunt ubonga abalandeli
Next articleuMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha